निर्मला पन्त हत्या प्रकरण आरोपी बबिता बमले खोलिन् यस्तो खुलाशा! एक्सक्लुसिभ यो भिडियो अवस्य हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > भिडियो > निर्मला पन्त हत्या प्रकरण आरोपी बबिता बमले खोलिन् यस्तो खुलाशा! एक्सक्लुसिभ यो भिडियो अवस्य हेर्नुहोस
admin September 15, 2018 भिडियो 0
बबिता बम ले निर्मलाको हत्या बारे यस्तो भनिन…कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धान नयाँ मोडमा आइपुगेको छ।घटनाको २४ दिनपछि मुख्यअभियुक्त भन्दै प्रहरीले दीलिपसिंह बिष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्‍यो। प्रहरीको कथन थियो- बिष्टले अपराध स्वीकार गरेका छन्। उनी नै मुख्यअभियुक्त हुन्।२० दिनपछि प्रहरीको त्यो कथन गलत सावित भएको छ।
सरकारीको वकिलको कार्यालयको आदेशपछि मंगलबार बिष्ट रिहा भएका छन्। निर्मलाको शरिरमा फेला परेको डिएनए बिष्टको डिएनएसँग नमिलेपछि उनी रिहा भएका हुन्सोही घटनामा पक्राउ परेकी निर्मलाकी साथी रोशनी र उनकी दिदी बबिता बम पनि मंगलबार नै रिहा भएका छन्। छोरी मारिएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि हत्यारा पत्ता नलागेपछि निर्मलाका बुवाआमा न्याय खोज्दै मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका छन्।
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छोरीका हत्यारा खोजिदिन आग्रह गर्ने उनीहरूको योजना छ। प्रहरीलेनै अभियुक्त भनेका बिष्ट रिहा भएपछि अब अनुसन्धान कहाँ केन्द्रित हुन्छ? स्वभाविक रूपले अगाडि दुइटा बाटा छन् ।
पहिलो, बिष्टले प्रहरीलाई सुरूमा दिएको बयान आफैं भनेका थिए वा कसैले सिकाएको थियो? त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
बिष्टले निर्मलाको बलात्कार र हत्याबारे वर्णन गरेका कुरा पोष्टमर्टम रिपोर्टसँग मिलेको बताइएको थियो। यहाँसम्मकी, उनले लगाएका भित्री कपडाको बयान पनि बिष्टले मिलाएकोले उनै अभियुक्त भएको निष्कर्षमा आफू पुगेको प्रहरीले बताएको थियो।
डिएनए परीक्षणबाट उनी निर्दोष देखिएपछि यसले दुइटा सम्भावनातर्फ संकेत गर्छ।
बिष्टलाई कसैले प्रलोभनमा पारी घटनाको सबै विवरण सिकाएर अपराध स्वीकार्न लगाएको। यदि त्यस्तो हो भने, प्रहरीले बिष्टलाई कसले प्रलोभनमा पारेको थियो? अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो। त्यो अनुसन्धानको सुरूआत बिष्टबाटै गर्नुपर्‍यो। यदि बिष्टले अपराध स्वीकारेका थिएनन् र प्रहरीले बाहिर झुठो विवरण भनेको थियो भने त्यो खास अपराधी बचाउनका लागि प्रहरीले अपनाएको हतकण्डा हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसो हो भने सुरूमा अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरीमाथि अब अनुसन्धान केन्द्रीत गर्नुपर्‍यो।
नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले भने अहिले पनि प्रहरीले अपराधी बचाउन झुठ बोलेको भन्ने स्वीकार्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। त्यसो भए अनुसन्धान बिष्टलाई कसले उपयोग गर्‍यो भन्नेमा किन केन्द्रीत नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ती अधिकृतले उनको मानसिक अवस्था स्थिर नभएकाले उनीमाथिको थप केरकार र अनुसन्धानमा भर पर्न नसकिने बताए। ‘तर पनि हामीले उनलाई अनुसन्धानकै घेरामा राखेका छौं, उनी निगरानीमै हुनेछन्’ उनले भने२० दिनअघि अनुसन्धानपश्चात बिष्टलाई मुख्यअभियुक्त भन्ने प्रहरीले अहिले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्ने अवस्था छैनभन्दा त्यसले थप शंका जन्माउँछ। ती अधिकृतका अनुसार अब निर्मलाको बलात्कार र हत्या उखुबारीमा नै भएको हो कि होइन भन्नेबारे पनि अनुसन्धान थालिएको छ। ‘उनको शव उखुबारीमा भेटिएको थियो। तर बलात्कार र हत्या त्यहीँ भएको हो वा शवमात्र त्यहाँ ल्याएर फालिएको हो भन्नेबारे पुन:आँकलन गर्दैछौं,’ उनले भने। उनले बिष्ट दोषी नभएपछि शंकास्पद सबैलाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताए। हिरासतमुक्त भए पनि बम दिदीबहिनी पनि प्रहरीको निगरानीमै छन्। ‘तर यो नै हो भनेर खुट्याउन अझै सकेका छैनौं,’ उनले भने। प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रीत गर्नु पर्ने अर्को पनि ठाउँ छ। अहिले निर्मलाको शरीरमा भेटिएको डिएनएको प्रोफाइल तयार भइसकेको छ। स्थानीयवासीले केही मानिसको नामै किटेर
उनीहरूघटनामा संलग्न भएको बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा प्रहरीले ती संदिग्धलाई पक्रेर डिएनए परीक्षण गराएर अनुसन्धानलाई टुंग्याउन सक्छ। तर प्रहरीले त्यसो गरेको छैन।‘हामीले शंकास्पद ठानेका अरू ब्यक्तिबारे न्युनतम प्रमाण जुटाएपछि मात्र डिएनए परीक्षणमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘केही प्रमाण नजुटाई डिएनए परीक्षणमा लगिहाल्न हतार नगरौं भन्ने हाम्रो धारणा छ।’यसअघि पनि बिष्टलाई सार्वजनिक गर्नुअघि उनको र निर्मलाको शरीरमा भेटिएको डिएनए परीक्षण गरेको भए उनी दोषी हुन् कि होइनन् पत्ता लागिहाल्थ्यो। त्यतातिर नलागी प्रहरीले उनलाई सार्वजनिक गर्न हतार गर्‍यो।बिष्ट नै अपराधी हुन् भनेर उनीविरूद्ध किटानी जाहेरी दिन निर्मलाका बुवाआमालाई दबाब दिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा परेको पर्‍यो।
घरको भान्छामा सबैलाई चकित पार्ने स्वर भेटियो, अर्को तारादेवीकै स्वर भन्छन् गाउँलेहरू… (भिडियो हेर्नुस)